Tobaneeyo Qof Oo Ku Dhimatay Duqeymo Ka Dhacay Magaalada Raqqa.
Wednesday June 25, 2014 - 16:09:47 in Wararka by
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ciidamada maamulka nuseyriga bashaar al-asad ay duqeymo ba'an ka geysteen xaafado katirsan wilaayada Raqqa.
Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay duqeymaha halka tobaneeyo kale ay ku dhaawacmeen,mas’uuliyiin katirsan wilaayada islaamiga raqqa ayaa sheegay in duqeymuhu ay ku dhaceen suuqa ugu weyn ee magaalada raqqa.
Boqolaal shacab ah oo ka dukaamaysanayay suuqa zaxmadda badan ee raqqa ayay duqeymuhu saameyn ku yeesheen,meydadka dadka dhintay ayaa waddooyinka magaalada daadsanaa muuqaallo lagu baahiyay baraha intenetka waxay muujinayeen xasuuq fool xun oo shacabka muslimiinta ah lagula kacay.
Burbur xoogan ayaa gaaray dhismayaasha magaalada Raqqa oo muddo kabadan laba saacadood oo xariir ah duqeymo ku socdeen sida ay sheegtay wilaayada raqqa.
Diyaaradaha dagaalka miigaga xukuumadda Nuseyriga ayaa 10-kii maalmood ee lasoo dhaafay duqeymo ay ka geysteen gobollada kala ah xalab.Deyruzuur,darca iy dimishiq ku dilay boqolaal shacab muslimiin ah.